အသင်းဝင်ဖြစ်ရန် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် စတင်ပါ။
မိမိ ကစားမည့်ကစားပွဲများကို ရွေးချယ်ပါ။
ကစားပွဲများကို စတင်ကစားခြင်းဖြင့် အနိုင်ငွေများကိုရယူပါ။
သင့်၏ အနိုင်ငွေများကို ထုတ်ယူပါ။
Q> အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ?
အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
လူကြီးမင်းတို့၏မှတ်တမ်းများကို ဖြည့်စွက်ပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့မှစပေါ်ငွေထည့်သွင်းရန် ဘဏ်အကောင့် အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြထားမည့်အသင်းဝင်များ ဆိုဒ်ထဲသို့ဝင်ရန် အပေါ်တွင်ရှိသောအကောင့်နာမည် နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်တို့ကိုလူကြီးမင်းတို့၏အီးမေးလ်သို့ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးစပေါ်ငွေ 20000 ကျပ် တင်ရပါမည်။
Q> ဘယ်ဘဏ်ကိုအသုံးပြူ နိုင်မလဲ?
ဧရာဝတီဘဏ်(AYA Bank),KBZ Bank,CB Bank အကောင့်ရှိသူများအားလုံး အသုံးပြုနိုင်သည်။
တစ်ပတ်(၇) ရက် မနက် (၁၀)နာရီ မှ ည(၁၁)နာရီ အထိငွေသွင်းငွေထုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
Q> “ဘောဒိုင်” ဆိုဒ်နှင့်ဘယ်အချိန်တွေမှာ ကစားခွင့်ရနိုင်မလဲ?
လူကြီးမင်းတို့ထံတွင် အင်တာနက်ရှိသည့်ကာလပတ်လုံး ၂၄ နာရီအချိန်မရွေး ကစားနိုင်ပါသည်။
Q> အနည်းဆုံးထိုးကြေး နှင့် အများဆုံးထိုးကြေး က ဘယ်လောက်လဲ?
Balldyne Register လုပ်ပြီး Member အကောင့် ဆိုဒ်ထဲတွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် ဤေနရာ ကိုႏွိပ္ပါ။
When accessing the site, you agree to respect the intellectual property rights of others. Your use of the site is at all times governed by and subject to laws regarding copyright ownership and use of intellectual property. You agree not to upload, download, display, perform, transmit, or otherwise distribute any information or content (collectively, “Content”) in violation of any third party’s copyrights, trademarks, or other intellectual property or proprietary rights. You agree to abide by laws regarding copyright ownership and use of intellectual property, and you shall be solely responsible for any violations of any relevant laws and for any infringements of third party rights caused by any Content you provide or transmit, or that is provided or transmitted using your User ID.
All contents of Site or Service are: Copyright © 2015-2017 Balldyne.
17. MYANMAR USE ONLY
The Site is controlled and operated by Company from its offices in Myanmar. The intended audience for this site consists of individuals in Myanmar only. Company makes no representation that any of the materials or the services to which you have been given access are available or appropriate for use in other locations. Your use of or access to the Site should not be construed as Company’s purposefully availing itself of the benefits or privilege of doing business in any state or jurisdiction other than Myanmar.